Liverpool Si Sahlan Ugu Gudubtay Europa League Play Offs, Inter Iyo Bilbao Oo Si Ciriiri Ku Soo Baxay. - jornalizem
Liverpool Si Sahlan Ugu Gudubtay Europa League Play Offs, Inter Iyo Bilbao Oo Si Ciriiri Ku Soo Baxay.
Liverpool ayaa si sahlan ku buukimatay booskeeda Europa League Play Offs, iyadoo uga mahadcelineysa guul 3-0 ah oo uu ka danbeeyay Luis Suarez oo ay ka gaareen lugtii labaad ee isreebreebka Europa League ee ay Anfield kula ciyaareen FC Gomel.
Suarez, oo qeybtii hore ee ciyaarta oo dhan ahaa mid kacsan ayaa ka soo shaqeeyay goolkii Fabio Borini, goolkaasoo ahaa goolkii ugu horeysay ee Borini uu u dhaliyo Liverpool ciyaar tartan rasmi ah islamarkaana uu ku hordhaliyo taageerayaasha Liverpool.
Joe Allen (Dhexda) Oo Daawanayay Ciyaarta Liverpool Saacado Ka Dib Markii Kooxdiisa U Sheegay Inuu Doonayo Inuu Liverpool Ku Biiro.
Ciyaaryahanka reer Uruguay ayaa sidoo kale ka shaqeeyay goolkii labaad ee dhashay isla qeybtii hore ee ee ciyaarta isagoo kubad ku taabo ah u dhigay kabtan Steven Gerarrd, waxaana uu goolkaas ahaa goolki 150aad ee kabtanka uu u dhaliyo Liverpool.
Glen Johnson ayaa ciyaarta hurdo u diray isagoo dhaliyay goolkii 3aad ciyaarta oo dhiman 20 daqiiqo, waxaana Liverpool oo weerarkeeda uu ahaa mid isdaba joog ah ay kaga talaabsadeen kooxda ka dhisan Belarus wadar ahaan labada lug 4-0.
Ku soo laabashada Luis Suarez ayaa ku dartay Liverpool wixii ka maqnaa markii ay u safreen Belarus.
Weeraryahanka oo ku dhawaaqay dhawaan inuu heshiis cusub u saxiixay kooxda ayaa mar kasta oo kubada taabto waxaa isla dhawaaqayay garoonka Anfield oo looga sacaba tumayay taasoo sarre u sii qaaday qaab ciyaareedkiisa.
Dhinaca kale kooxaha Internazionale iyo Athletic Bilbao ayaa si ciriiri ah uga fogaaday inay ceeb ka soo gaarto isreebreebka wareega 3aad ee Europa League.
Kooxda Serie A ka dhisan ayaa guuldarro 2-0 ah waxa ay ka soo gaartay Hajduk Split oo marti ku aheyd San Siro. waxaana ay Inter badbaaday kaliya guushoodii 3-0 ee ay lugtii hore ku soo gaareen garoonka kooxda Split.
Dhibaatada Inter ayaa bilaabatay daqiiqadii 23aad markii weeraryahanka Hajduk Ivan Vukovic uu qalad ku galay Walter Samuel, waxaana rigoore loo dhigay gool u sarifay Vukusic.
Inter ayaa fursado badan heshay ka hor inta aan la aadin xilligii nasashada, lakiin dib ayay u sii dhacday markii Vukovic uu goolkii labaad u dhaliyay Hajduk Split daqiiqadii 68aad.
Vukusic ayaa ku dhawaaday inuu ciyaarta u diro waqti dheeri ah, ka dib markii uu kubad joog hoose ah ku sigay goolka Inter, iyadoo taageerayaasha Inter ay aamusanaan ku daawanayeen ciyaarta.
“Kaliya waa 9ka August, waxaan oo kale waa ay dhacaan” ayuu yiri tabaaraha Inter Andrea Stramaccioni. “Muhimada waxa ay tahay inaan ka soo gudubnay wareega 3aad ee isreebreebka Europa League”
Athletic Bilbao, oo xilli ciyaareedkii hore soo gaartay finalka koobkaan ayaa iyadana soo baxday inkastoo guuldarro ay ka soo gaartay kooxda Croatia iyadoo ay 2-1 kaga badisay Slaven Belupo Koprivnica lakiin wadar ahaan labada lug ayay ku badiyeen 4-3.